လကျကြိုးပွီး ဆေးရုံရောကျနခြေိနျ သူနာပွုကောငျလေးအား ခဈြတယျဟုပွောပွီး လကျထပျခှငျ့ပါတောငျးခဲ့တဲ့ ကောငျမလေး video
မဆေ့ေး၊ ထုံဆေးနဲ့ အခွားပွငျးထနျသောဆေးဝါးတှဟော လူနာတှကေို သတိမမြေ့ော မလှုပျရှားနိုငျအောငျပွုလုပျနိုငျသလို၊ ထိုဆေးရှိနျ မပယျြသေးခြိနျမှာလညျး လူနာတှဟော ကယောငျကတမျးနဲ့ ရယျစရာတှပွေုလုပျတတျ ကွပါတယျ။ စာဖတျသူမြားအနနေဲ့လညျး ထိုကဲ့သို့သောလူနာမြားရဲ့ ရယျစရာကောငျးသောဗီဒီယိုမြားကို ကွညျ့ဖူးကွပါလိမျ့မယျ။ ယခုဖွဈစဥျဟာလညျး ထိုသို့ ရယျစရာကောငျးသော ဖွဈရပျမြားထဲမှ တဈခုအပါအဝငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရုပျသံဖိုငျကို အောကျဆုံးမှာတငျပေးထားပါတယျ အမြိုးသမီးလူနာတဈဦးဟာ […]
အရမ်းမှန်တဲ့ တစ်ပါတ်စာ ၇ရက်သားသမီးများဟောစာတမ်း (21.5.2020 မှ 27.5.2020 အထိ)
PPE ဝတ်စုံဝတ်ထားပေမယ့် အထင်းသားမြင်နေရတဲ့ ဘော်ဒီအလှကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့သူနာပြု.
မုန်တိုင်း အရေးပေါ် သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာ အထူးသတိပြုကြပါ
မုန်တိုင်း အရေးပေါ် သတိပေးချက် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း သတင်း အမှတ်စဉ် (၃၃/၂၀၂၀)(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၁ ရက်) (မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၇:၀၀)နာရီ အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Cyclonic Storm) အခြေအနေ ၁။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ […]
လူတိုငျး သတိထားကွရမဲ့ အိမျနိမိတျ (၁၂) မြိုး (မိတျဆှအေတှကျပါ ရှဲယျပေးလိုကျပါ)
သတိမထားမိကြတဲ့ အိမ်နိမိတ် ၁၂ ချက် ၁။ အိမ်ထဲမှာ ထီးမလှန်းပါနဲ့။ အိမ်စောင့်နတ် ကိုယ့် မျက်တတ်တယ်။ ၂။ နာရီအကွဲအပျက် ချိတ်မထားပါနဲ့။ ရုတ်တရက်မြည်လျှင် သေနိမိတ်ပါ။ ၃။ ဘယ်ပန်းအိုးမှ ပန်းဖြူ၊ ပန်းနီ နှစ်မျိူးထည့်တွဲမထိုးပါနဲ့။ မတော်တဆ ထိခိုက်မူဖြစ်တတ်တယ်။ ၄။ နံရံကို ဆေးအစိမ်းရောင်မသုတ်ပါနဲ့။ […]
မြိတ်မြို့ တော့ ခေါင်းကြီးပြီ……ဖြစ်လိုက်ရင် နောက်ဆက်တွဲ က တသီတတန်းကြီး ပါပဲလား
Case-185 လူနာကိုလာရောက်ပို့ ဆောင်ခဲ့တဲ့ကား မှာ မြိတ်မြို့ သို့ လည်းဝင်ရောက် ခဲ့တဲ့ အတွက် ယာဉ်မောင်းနှင့် ထိတွေ့နိုင် သည့် နေရာ များ ကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေ ဖြစ်လိုက်ရင် နောက်ဆက်တွဲ က တသီတတန်းကြီးပါပဲလား. တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပထမဆုံး အတည်ပြုလူနာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ ရသည့် Case […]
ဒုတိယအကွိမျ မီတာခမြားထပျမံလြှော့ပေးမညျဖွဈကွောငျး လြှပျစဈနှငျ့စှမျးအငျဝနျကွီးဌာန ကွငွော.
ဒုတိယအကွိမျ မီတာခ လြော့ပေး ကိုဗဈ၁၉ ကာလ ဒုတိယအကွိမျအဖွဈ မလေ(၁)ရကျမှ (၁၅)ရကျအထိသုံးစှဲသော အိမျသုံးလြှပျစဈဓာတျအားသုံးစှဲမှု (၇၅)ယူနဈအထိကို ငှကွေေးကောကျခံမှုကငျးလှတျခှငျ့(အခမဲ့) ထပျမံပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာနက ကွညောလိုကျသညျ။ လဆနျး ၁၅ရကျအတှငျး အိမျသုံးမီတာ ၇၆ ယူနဈနှငျ့အထကျသုံးစှဲသူမြားအနဖွေငျ့ သတျမှတျမီတာခအတိုငျး ပေးဆောငျရမညျဖွဈသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလကလညျး ကိုရိုနာကာကှယျရေးထိနျးသိမျးကာလဖွဈသောကွောငျ့ […]
လူမမယ်အရွယ်သမီးလေးကို ဆရာလေးဝတ်ပေးကာ အလှူခံ ခိုင်းစားပြီး တစ်ရက် ၇၀၀၀ မှ မအပ်နိုင်ရင် ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တဲ့ မိခင်
မနေ့ ညက အိတ်ရေးပျက်ခံပြီး ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက် ဂုဏ်သိက္ခာမကျအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြရှင်းပေးကြသော အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့် နယ်မြေမှုးများ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ မီးသက်တပ်ဖွဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရဲ့ စည်းလုးံညီညွှတ်စွာနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ချက်လေးတွေကိုတော့ လေးစားမိတယ်ဗျ။အကြောင်းကဒီလိုပါ…… ပုံပါ ၇ နှစ်အရွယ် သီလရှင်ဆရာလေးကိုကျောင်းမထား စာမသင်ပဲ ဘာသာသာသနာညှိုးနွမ်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးအလှုခံခိုင်းစားနေတဲ့တာဝန်မဲ့အမေတယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်ကိုဖေါ်ထုပ်တားဆီးနိုင်ခဲ့လိုက်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ သူတို့ နေထိုင်တာက ပညာရေးတောင်ဘက် တက္ကသိုလ်တံတိုင်းဘေးချောင်းနုတ်ခမ်းပေါ် ကျုးကျော်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တာ ၃ […]
သနားလိုက်တာခလေးရယ် နေအိမ်ပေါ်၌ မစင်စွန့်သည့် ၂ နှစ်သမီးကိုပထွေးဖြစ်သူက ရိုက်နှက်ဆုံးမရာ သေဆုံးသွားခဲ့
နေ အိမ်ပေါ် ၌ မစင်စွန့်သ ည့် ၂ နှစ်သမီး ကို ပထွေးဖြစ် သူ က ရိုက်နှက်ဆုံးမရာ သေဆုံးသွားခဲ့ ဧ ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ၃ မိုင်ဆေးရုံ၌ ၂ နှစ်အရွယ်ရှိကလေးတစ်ဦး ဒဏ်ရာများဖြင့် မတ်လ ၁၈ ရက်၊ ည […]
တော်လှန်ရေးကာလ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်သီဟတင်စိုး ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံကြောင့် အမှုဖွင့်ခံရပြန် (ရုပ်သံအပြည့်စုံ)
ရုပျရှငျနှငျ့ ဗီဒီယိုအကယျဒမီဆုရှငျ သီဟတငျစိုးငှကွေေးအရှုပျတျောပုံကွောငျ့ ကြိုကျလတျမွို့၌ အမှုဖှငျ့ ခံရ ရုပ်သံဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတင်ထားပေးပါတယ် “အပွငျကနေ ခြေးပေးတဲ့ပိုကျဆံလညျးပါတယျခငျဗြာ၊ အဲ့ပိုကျဆံတှကေို ကြှနျတျောကို ယုံလို့ပေးတာဆိုတော့ ကြှနျတျောကပွနျပွီး လယျပေါငျပွီးတော့တောငျ ဆပျထားရပါတယျ” ကိုနလေငျးနိုငျ(ကြိုကျလတျဒသေခံတဈ ဦး) ရုပျရှငျနှငျ့ဗီဒီယိုသရုပျဆောငျ အကယျဒမီဆုရှငျ သီဟတငျစိုးသညျ ငှကွေေးအရှုပျတျောပုံကွောငျ့ ဧရာဝတီတိုငျး ဒသေကွီး၊ ကြိုကျလတျမွို့၌ […]